isku keenida Qoysaska kala maqan oo noqday Qodobka ugu adag ee Xisbiyada ku heshiinwaayeen
HomeWararka Maanta Somaliskaisku keenida Qoysaska kala maqan oo noqday Qodobka ugu adag ee Xisbiyada ku heshiinwaayeen
Wada xaajoodkii xisbiyada siyaasadda dalka ee arrimaha socdaalka ayay xisbiyada ku heshiin waayeen qoddobka la xiriira isu geynta qoysaska kala maqan.
Maria Malmer Stenegard oo ah afhayeenka siyaasadda socdaalka ee xisbiga M ayaa sheegtay in lagu kala aragti duwan yahay qoddobka mideynta qoysaska iyada oo sheegtay in xisbigooda uu doonayo in sharuud adag lagu xiro qofka doonayo in reerka loo keeno iyo sharuud ah in uu masruufi karo. Xisbiga
Dhanka kale, qormo dood ah oo lagu soo daabacay wargeysa DN ayuu hoggaamiyaha xisbiga kale ee SD Jimmie Åkesson ku sheegay in dad gaaraya 100 kun la siiyay deganaashiyaha joogtada ee Sweden 2010-2020, arrintaasi oo u sheegay in ay kordhisay fal dambiyeedka, uuna ku baxay qarash badan sidoo kalana ay buurta dhibaatooyin bulshada ah.
Xisbigaasi ayaa doonaya in tiraddam agan gelyo doonka laga saarayo Sweden in ay ka badato kuwa soo gelaya.
Xsbiyada ku jira dowlad wadaaga sweden ayaa dhankooda ku kala aragti duwan qodobkan waxana maanta lagu daray mudo bil ah sharciyada cusub ee lagu badalayo midka ku meel gaarka ee hada jira oo la filayo in uu sanadka danbe dhaco,